A Gentleman’s Dignity ( 2012 ) - Myanmar Asian TV
ဆယ်ကျော်သက် လူငယ်အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေချည်းပဲ ရိုးအီလာကြတယ့် ပရိသတ်တွေအတွက် အသက် 40 အရွယ် လူပျိုကြီးတို့ရဲ့ အချစ်ဟာသဇာတ်လမ်းလေးကို ရသအသစ်တစ်ခုအနေနဲ့ ခံစားလို့ရအောင် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် … ဒီဇာတ်ကားလေးကတော့ 2012 ခုနှစ်ထဲက ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ နာမည်ကျော် Korean Comedy Series လေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ် …
Main Cast တွေအနေနဲ့ Jang Dong-Gun, Kim Su-Ro, Kim Min-Jong, Lee Jong-Hyuk တို့နှင့်အတူ Kim Ha-Neul, Yoon Se-Ah တို့က ပါဝင်ထားပါတယ် ….
Kim Do-jin ၊ Im Tae-san ၊ Choi Yoon နဲ့ Lee Jung-rok တို့ ၄ ယောက်ဟာ ငယ်ငယ်ထဲကအချစ်ဆုံးသူငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြပါတယ် … တစ်စုံတစ်ယောက်ကို လက်ထပ်ဖို့စိတ်ကူးမရှိတဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ Architect တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Kim Do-jin နဲ့ ရိုးသားပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကျောင်းဆရာမလေး Seo Yi-soo တို့ အပျော်တမ်း baseball ပြိုင်ပွဲမှာ တွေ့ဆုံမိရာက သူတို့2ယောက်ကြားမှာ romantic ဆန်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး ဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ် …
Seo Yi-soo က သူငယ်ချင်းရဲ့ရည်းစားကို တစ်ဖက်သတ်ကြိုက်နေတာကို Kim Do-jin သိသွားတဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲ? Seo Yi-soo ကရော သူ့ကို တစ်ဖက်သတ်ချစ်နေတဲ့ Kim Do-jin ကို ပြန်ချစ်နိုင်မှာလား?
သက်လတ်ပိုင်းယောကျာ်းလေးယောက်ရဲ့ အချစ်နဲ့ဘ၀အကြောင်းတွေကို ဟာသဆန်ဆန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပျိုမေတို့ရဲ့ အသည်းစွဲဖြစ်တဲ့ ဒါရိုက်တာရင်လို့ခေါ်တဲ့ ဂျန်ဒေါင်ဂန်က ကင်ဒိုဂျင်းအဖြစ်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ် …
တကယ်ကို ရီမောပျော်ရွှင်စေနိုင်တဲ့ ဇာတ်ကားအမျိုးအစားလေး ဖြစ်တဲ့အတွက် romantic comedy ကြိုက်သူတိုင်းအတွက် တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော် … Rating အရ IMDb မှာ 8.1/10 နှင့် MyDramaList မှာ 8.4/10 အသီးသီးရရှိထားပါတယ် …
( ဇာတ်လမ်းအညွှန်းကိုတော့ Mee Nge မှ ရေးသားပေးထားပါတယ် )
Translators : Poe Thiri Swe, Rabbit, Khin Khin Khant & May Oo
Starring: Jang Dong-gun, Kim Ha-neul, Kim Jung-nan, Kim Min-jong, Kim Su-ro, Kim Woo-bin, Lee Jong-hyuk, Lee Jong-hyun, Park Joo-mi, Yoon Jin-yi, Yoon Se-ah,